घरमा श्रीमती हुँदाहुँदै बाहिर किन ? थाहा पाउनुहोस् – hamrosandesh.com
घरमा श्रीमती हुँदाहुँदै बाहिर किन ? थाहा पाउनुहोस्
करुणाजी नमस्कार । घरमा स्वस्थ यौन सम्बन्ध हुँदाहुँदै बाहिरतिर किन त्यस्तो आकर्षण हुन्छ रु मनोविज्ञानले यसलाई कुन रुपमा लिन्छ ?
यो मेरो आफ्नै समस्या हो । म र मेरी श्रीमतीबीच राम्रो सम्बन्ध छ । हामीले प्रेमविवाह गरेका हौं । हाम्रो यौनसम्बन्ध पनि सन्तुष्टिदायक नै छ । यति हुँदाहुँदै पनि म बाहिरतिर पनि आकर्षित हुन्छु । घरमा सबै कुरा प्राप्त हुँदा पनि किन यस्तो हन्छ ?
यसरी बाहिरी आकर्षणमा पर्नु भनेको श्रीमतीलाई धोका दिनु नै हो रु महिलामा यस किसिमको आकर्षण हुन्छ कि हुन्न ?
जवाफ: श्रीमतीसँग राम्रो सम्वन्ध नरहेको लक्षण हो
बाहिर यौन सम्बन्ध स्थापित हुनु वा त्यस प्रकारको सोच आउनुमा बिवाहित दम्पतीबीच सम्बन्ध कस्तो छ भन्नेमा भर पर्छ । घरमा श्रीमतीसँग सबैखाले सम्बन्ध राम्रो छ भने बाहिर सामान्य आकर्षण भए पनि यौनसम्बन्धको हदसम्म जाँदैन ।
बाहिर यौन सम्बन्ध स्थापित हुन पुग्यो र त्यसबारे श्रीमतीलाई थाहा छैन भने त्यो धोखा नै ठहरिन्छ । बाह्य सम्वन्ध कायम गरेर यौन सन्तुष्टि खोज्नु भनेको दाम्पत्य जीवनमा जुवा खेले समान हो । यस विपरीत अन्य धेरैले जस्तो श्रीमतिसँगको यौन सम्वन्धलाई भावनात्मक रुपमा पनि रोचक र रमाइलो बनाउनु बुद्विमानी हुन्छ ।
ओछ्यानको तनाव अर्थात ‘ट्रबल इन द बेड’ आधुनिक विश्वका कामकाजी मानिसहरुको समस्या बन्दै गएको सही हो । ओछ्यानको तनाव बढ्दै गएपछि मानिसहरु अर्को स्थायी वा अस्थायी पार्टनर खोज्नेतिर लाग्छन् । त्यसबाट अझ समस्याग्रस्त बनेर पुरानै अवस्थामा फर्किनेहरु पनि छन् । त्यसैले श्रीमतीसँगको यौन सम्वन्धलाई रमाइलो र सन्तुलित बनाउन आफूभित्रका कमजोरी पहिचान र सम्भावनाहरुको खोजी गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ ।
एकभन्दा बढी यौन जोडी बनाउनेहरुले भावनात्मकसंगै सामाजिक जटिलता पनि निम्ताईरहेका हुन्छन् । आफ्नो पार्टनरबाहेकसंगको यौन सम्बन्धले डर, चिन्ता र ग्लानीभाव सिर्जना गर्छ । यस्तो भावनाले पार्टनरसँगको यौन सम्बन्धमा मात्र नभई दैनिक कृयाकलापमा पनि असर गर्न थाल्छ । यसको निवारण छिटो हुनु बेस हुन्छ ।
स्वस्थ जीवनका लागि यौन मनोविज्ञानका सीपबारे पनि कुरा गर्नु आवश्यक हुन्छ । सबैको आवश्यकता यौन सम्बन्धलाई किन स्वस्थ राख्नुपर्छ भनेर चर्चा हुनैपर्छ । स्वस्थ यौन सम्वन्धमा जोडीमध्ये दुवैले आनन्द महसुस गरेको हुनुपर्छ । कुनै एकजनाले दबावमा परेको महसुस गर्नु हुँदैन । एक जनालाई ईच्छा नभए अर्कोले त्यो भावनाको सम्मान गर्नुपर्छ । यस्तो समस्या र दुविधा बढेको अवस्थामा मनोचिकित्सकको परामर्श लिन उपयुक्त हुन्छ ।